Momba an'i Micen - MICEN CO., LTD
Micen dia mpanamboatra sy mpamatsy vahaolana vahaolana isan-karazany & azo ampiharina ho an'ny marika sy orinasa hatsaran-tarehy. Manomboka amin'ny mpamokatra tavoahangy fitaratra amin'ny 2006, manana birao sy toeram-pamokarana any Sina sy Aostralia izy. Micen dia mitombo tsikelikely ary manao ezaka amin'ireo tanjona napetraka.
Ny orinasan'i Micen dia miompana amin'ny laharam-pahamehana efatra: famolavolana, fampivelarana, fanovozana ary famokarana vahaolana ho an'ny vokatra ara-pitsaboana sy hatsaran-tarehy.
Ny orinasa izay miorina ao an-tanàna Wuxi miaraka amin'ny tranokala famokarana GMP mihoatra ny 10000 metatra toradroa. Atambaro ireo vokatra vita amin'ny vera, plastika ary Aluminium.
Micen dia tsy manome fonosana mahazatra fotsiny fa koa fonosana namboarina ho an'ny menaka manitra, hanitra, fikolokoloana hoditra ary makiazy. Ny tsipika famokarana dia manarona fanaovana tavoahangy fitaratra, fanindronana plastika, alu-totohondry, fanodinam-bolo, fivoriambe, fanontana lamba vita amin'ny landy ary fametahana mafana Tombony amin'ny rafitra ERP, i Micen dia miezaka hatrany manangana atrikasa "mangarahara" ho an'ny mpanjifanay ary miantoka ny fotoana fitarihana haingana kokoa.
Manam-pahaizana manokana momba ny famokarana fonosana kosmetika kely fahaizana i Micen. Nandritra ny folo taona mahery tamin'ny fampivoarana sy famokarana traikefa fonosana fanatsarana tarehy, nanondrana erak'izao tontolo izao ny marika micen cosmetika toy ny AVON, L'oreal, Dior sy ny hafa.
Ny orinasan'i Micen's design Fanso design ao Shanghai dia fanohanana lehibe amin'ny famolavolana sy ny fampandrosoana ny vokatra. Miara-miasa i Micen sy Fanso amin'ny famatsiana fonosana ara-tontolo iainana sy mahafinaritra ary koa serivisy tsara ho an'ny mpanjifanay.
Fampisehoana orinasa (orinasa)
Ny entana dia nandalo tamin'ny alàlan'ny fanamarinana mari-pahaizana nasionaly ary noraisina tsara tao amin'ny orinasa lehibe. Ny ekipanay injeniera manam-pahaizana dia matetika vonona hanompo anao amin'ny fizahana sy hevitra.